Boomerangs: သူတို့ကိုမည်သို့တည်ဆောက်။ စတင်မည် - Ikkaro
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း >> ထိကပြန်
တစ် ဦး boomerang ကဘာလဲ?
boomerang ဆိုသည်မှာပစ်ချခံရပြီးနောက်အထူးပရိုဖိုင်းနှင့်စတင်ပုံသဏ္toာန်ကြောင့်မူလနေရာသို့ပြန်သွားသည်။ သစ်တစ်ခု၊ ပလပ်စတစ်၊ ကတ်ထူပြား၊ ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ၊
တစ် ဦး boomerang ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်
၎င်းတို့သည်မည်သည့်ပုံသဏ္almostာန်ကိုမဆိုယူနိုင်ပြီး ၄ င်းတို့၏ ၀ င်ရိုးတွင်လှည့်နိုင်ရန်အတွက်စတင်ရန်လိုအပ်သည်။ လေထဲတွင်အတက်သည်လေယာဉ်ပျံ၏အတောင်ပံနှင့်ဆင်တူသောဓါးသွားများ၏ပုံသဏ္dueာန်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ boomerang သူ့ဟာသူလှည့်နှင့်ခရီးသွားအဖြစ်လေထု "တိုက်ခိုက်ခြင်း" ။ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၏လမ်းကြောင်းသည် linear speed နှင့်ယင်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝင်ရိုးပေါ်တွင်လှည့်သောအမြန်နှုန်းနှင့်မတူသော boomerang တစ်ခုစီ၏သီးခြားဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် boomerang သည်၎င်း၏ ၀ င်ရိုးနှင့်လှည့်ပတ်နေစဉ်တွင်ထိုအချိန်က boomerang ၏ရွေ့လျားမှုလမ်းကြောင်းသို့လှည့်သောဓါးသည်ထိုထက်ပိုသောအချိန်ကိုပြောင်းခြင်းသို့ပြောင်းခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းကြောင်းသို့လှည့်သောတစ်ခုထက်ပိုသောအရာများကိုထောက်ပံ့သည်။ torque ကိုထုတ်လုပ်သို့မဟုတ်ထိုသဘောမျိုး gyroscopic precession ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် Boomerangs တွင်ဓါးသွားအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ဓါးသွားများသည်တူညီသည် (သို့) boomerang အချိုးအစားမဖြစ်ရန်၊ V, W လိုမျိုးပုံစံမျိုးထုတ်လုပ်သည့်အရှိန်မြင့်သောဓါတုပစ္စည်းများသည်ဓါးသွား ၃ ခု၊ ဓါးသွားများရဟတ်ယာဉ်၏ဓါးများကဲ့သို့ဖြန့်ဝေထားသည်။ သားပိုက်ကောင်၊ လိပ်တစ်ကောင်၊ ငါးကဲ့သို့ပုံဖော်ထားသည် လက်ရှိ boomerang အားအားကစားနည်းသည်ကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့နေသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ ဖမ်းယူနိုင်သည့်နည်းလမ်း၊ ပြန်လာမှု၏တိကျမှု၊ ပျံသန်းချိန်၊ အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း“ ဖမ်းမိသောအရေအတွက်” သို့မဟုတ်အကွာအဝေးရှိနိုင်ငံတကာချန်ပီယံများရှိသည်။ ဥပမာများစွာ ပေး၍ မပြန်မီဝေးသွားသည်။
အများအားဖြင့် boomerang ဟုခေါ်သောအပိုပစ္စည်းအားလုံးသည် Launcher သို့ပြန်သွားသည်မဟုတ် - သြစတြေးလျဘော်ရီဂျင်နီများကအမဲလိုက်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသူများသည်မပြန်ခဲ့ကြပါ။ သူတို့၏အမည်မှာ boomerang မဟုတ်ဘဲ kylie ဖြစ်သည်။
Boomerangs သည်သြစတြေးလျနှင့်မတူပါ။ ယခုအချိန်အထိရက်စွဲကိုချိန်းတွေ့နိုင်ခဲ့သူမှာအသက်အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင်ပိုလန်နိုင်ငံတွင်တွေ့ရှိပြီး၎င်းအသက်သည်နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀၀ ကျော်လွန်သည်။ ၎င်းတို့ကိုတိုက်ကြီးငါးတိုက်တွင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းသုံးထောင်ကျော်ကတူတန်ခမ်မွန်၏သင်္ချိုင်းတွင်ပင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
စက္ကူ boomerang လုပ်နည်း
အလွန်ရိုးရှင်းသော်လည်း၊ ၎င်းသည်အလုပ်ဖြစ်တယ်၊ သို့သော်၎င်းကိုပြန်ပစ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှာရန်ခက်ခဲသည်ကိုငါသတိပေးရန်လိုသည်။ သစ်သားထုပ်လုပ်သူများသို့မဟုတ်အခြားကြော်ငြာများကဲ့သို့သောရလဒ်များကိုမျှော်လင့်မထားပါနှင့်။ အစည်းအဝေးတစ်ခုသို့မဟုတ်ကလေးကစားရန်ကျပန်းကစားပွဲတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းပါသည်။
၃၀ - ၄၀ စင်တီမီတာကိုကျွန်တော်ရခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကျော်လွှားနိုင်မနိုင်စမ်းကြည့်နိုင်တယ် ;-)
ငါသည်သင်တို့ကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုများထားခဲ့ပါ, သူတို့ထဲကမဆိုနှင့်အတူအလုံအလောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေမယ့်, လှုပ်ရှားမှုလုပ်ဆောင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်ရရှိရန်သိပ်မများသော်လည်း စက္ကူ boomerang ပြန်သွားပါ
Pierre Kutek အားဖြင့် Boomerang အသေးစိတ်ပုံစံ
အောက်ပါ link သည် boomerang ကမ္ဘာတွင်အလွန်သြဇာညောင်းသောကြောင့်၎င်းသည်၎င်းကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်ပို့စ်တစ်ခုထိုက်တန်သည်ဟုငါထင်သည်။
ငါကဲ့သို့စတင်ထွက်ခွာသွားသို့မဟုတ်စပ်စုနေသောသူတို့သည်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ် Boom ကျွမ်းကျင်သူများက၎င်းကိုသေချာသိသော်လည်း၎င်းသည်ဘုံရည်ညွှန်းမှုရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါဟာ၏ဝဘ်ဖြစ်ပါတယ် Pierre ၏ Kutek ရာပေါင်းများစွာသောရရှိနိုင်သည့်အစီအစဉ်များနှင့်အတူ boomerang အစီအစဉ်များ၏ဒေတာဘေ့စ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သည်
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း boomerangs ၏ရိုက်ချက်များကိုအကောင်းဆုံးစုစည်း အင်တာနက်ပေါ်မှာရှာလို့ရတာ
CD သို့မဟုတ် DVD နှင့်အတူ Boomerang
သူတို့ကအဝိဇ္ဇာသည်အလွန်ရဲရင့်သည်ဟုဆိုကြသည်။ နှင့်ဤသက်သေငါ၏အကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပါတယ် တစ် ဦး cd နှင့်အတူတစ် ဦး boomerang တည်ဆောက်ပါပြီးပြည့်စုံသောပျက်ကွက်ဖြစ်ထွက်လှည့်သော။
ဒါပေမယ့်ဘလော့ဂ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ကျွန်မရဲ့ namesake ကြောင့် Boomeralia ကအထူးအကြံပြုလိုတယ်၊ CD နှင့်အတူ boomerang ၏ရှေ့ပြေးပုံစံနှင့်အစီအစဉ်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်
ပြီးတော့ငါစီဒီ / ဒီဗီဒီဖွင့်ဖို့အခွင့်အရေးယူတယ်
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် Stanislaus စန်းသူကဘယ်သူလဲ၊ ဘယ်သူ့ကိုငါကိုးကားချင်လဲမသိဘူး
boomerang ကိုစီဒီဖြင့်တည်ဆောက်ပါ (ပျက်ကွက်ခြင်း)
လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကမင်းက c လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာဖတ်ခဲ့တယ်CD ကိုအသုံးပြု။ boomerang တည်ဆောက်ခြင်း, နှင့်အချင်းဝက်နှင့်အတူပျံသန်းဖို့ဖြစ်နိုင်ခဲ့ကွောငျးငါစမ်းသပ်ဖို့ခဲ့ရတယ်။
ဘာမှမပြုမီနှင့်ငါ့နောက် ယခင်တစ် ဦး boomerang တည်ဆောက်ရန်ပျက်ကွက် ငါဒီတစ်ခုမပျံသန်းသေးဘူးဆိုတာသတိပေးရမယ်။
တစ် ဦး boomerang တည်ဆောက်ခြင်း 1
ငါတောင့်တတာကြာပြီ ငါ့ကိုယ်ပိုင် boomerang လုပ်ပါ။ အသုံးပြုမည့်ပစ္စည်းများနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အစီအစဉ်များနှင့်ရှင်းလင်းချက်များရှိသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်များရှိသည်။
ဒါပေမယ့်အစဉ်မပြတ်ငါငါ့ ဦး ခေါင်းထဲသို့သွင်းထားသောအရာကိုသက်သေပြခဲ့ရသည်နှင့် အတှေ့အကွုံ များစွာသောလူကဆန့်ကျင်အကြံပေးခဲ့ပေမယ့်။
ငါဒီ post ကိုထုတ်ဝေဖို့မသွားခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဘယ်လို အမှားအယွင်းများလည်းမူတည်သည်ဒီမှာ အဖြူရောင်အမြီးရှိသော boomerang တည်ဆောက်ရန်ကြိုးပမ်းသည်.
စိတ်ကူးကအရမ်းရိုးရှင်းပါတယ် ငါ့မှာ ထိကပြန်, ငါကနေမှိုလုပ်ပြီးတော့ငါရုံဖြူကော်နှင့်ဖြည့်ပါ။
တစ် ဦး boomerang ပစ်ချရန်
ဒီဘလော့ဂ်မှာပါ ၀ င်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာမူရင်းဒါမှမဟုတ်ငါတို့ရဲ့ဖြည့်စွက်ချက်တွေနဲ့ပဲဖြစ်ပေမယ့်ဒီဝါသနာ / အားကစားကိုစချင်တဲ့သူတွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ထင်တဲ့ boomerang ကိုဘယ်လိုလွှင့်ရမလဲဆိုတာကိုဒီဆောင်းပါးကိုတင်ချင်ပါတယ်။
boomeralia မှဆောင်းပါးနှင့်ဓာတ်ပုံများ။ သူတို့ဆောင်းပါး၏မျိုးပွားခွင့်ပြုဘယ်မှာမှ။
နေသမျှကာလပတ်လုံးပြားချပ်ချပ်အစိတ်အပိုင်းအပြင်ဘက်ပေါ်မှာဖြစ်သကဲ့သို့သင်ကြိုက်နှစ်သက်အဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိ။ ဘယ်ဟာကိုဂေါ်ပြားကလက်ချောင်းနှစ်ချောင်းဖြစ်စေ၊ လက်တစ်လုံးတည်းဖြစ်စေဖြစ်စေ။ မင်းလုပ်နိုင်မှာပါ
ငါတို့ဖမ်းမယ် စည်သူ ငါတို့လိုချင်သည်အတိုင်း, ပြားချပ်ချပ်အစိတ်အပိုင်းအပြင်ဘက်၌တည်ရှိ၏နှင့်ကွေးအစိတ်အပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာနှင့်အနီးဆုံးဖြစ်သကဲ့သို့။ ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သောမည်သည့်ချုပ်ကိုင်မှုမဆိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံလောက်သောစွမ်းအားပေးသရွေ့အလုပ်လုပ်သည်။ အဆိုပါ boomerang သေနတ်သမားဆီသို့ခုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်ဖမ်းမိ။ အမြဲတမ်းအပြင်မှာပြားနေတယ်။ ဤပုံကြမ်းသည်ညာသန်ဖြစ်သည်
တစ် ဦး boomerang တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပျံသန်း
ကြိုးစားကြည့်ရအောင် တစ် ဦး boomerang တည်ဆောက်ပါအခြေခံဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောလေယာဉ်ခရီးစဉ်တစ်ခုရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားစီမံကိန်းများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည့်လေခွင်းအားနည်းချက်များအကြောင်းသင်ကြားပေးလိမ့်မည်။
တစ် ဦး boomerang ကဘာလဲ? အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်တောင်ပံတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်း၏ပုံသဏ္,ာန်၊ ပုံသဏ္andာန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖြန့်ချိသည့်အမျိုးအစားတို့ကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ထံပျံသန်း။ ပြန်လာစေသည်။ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ။ တောင်ပံများနှင့်သက်ဆိုင်သောအတတ်ပညာများကိုလုံလောက်စွာပုံစံချခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပေါ်ပိုင်းနှင့်ဖိအားနိမ့်နိမ့်နိမ့်ပိုင်းတွင်မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် lift effect ဟုခေါ်သောအရာသည်၎င်းသည်ဆွဲငင်အား၏အပြုအမူကိုပြောင်းလဲသွားစေသည်။ ခေါ်ဆိုနိုင်သည့်အခြားဆောင်းပါးတစ်ခုတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံပါ အဘယ်ကြောင့်လေယာဉ်ပျံသလဲ?